Ny Lalàna: mitandrema, miovaova ny vanim-potoanan'ny fanekena. | Valin'ny Fanamarinana
Home Lalàna Vanim-potoanan'ny fanekena
Iray amin'ireo fanamby goavana indrindra ho an'ny ray aman-dreny, sekoly, tanora ary manampahefana ara-dalàna amin'izao fotoana izao ny manampy ireo zatovo mba hiara-mandeha amim-pahasambarana amin'ny faritra manasitrana eo anelanelan'ny 16 taona sy 18 taona. Ny teknolojian'ny aterineto dia mahatonga ny famoronana sy ny fifindran'ny sary mampihetsi-po ho an'ny olona rehetra miaraka amin'ny smartphone, anisan'izany ny zaza. Ny heloka bevava ara-pananahana dia niakatra 53% satria 2006-7 araka ny tarehimarika 2015-16 napetraky ny governemanta Scottish. Ny fiakarana goavana amin'ny tatitra momba ny heloka bevava ara-nofo amin'ny ampahany amin'ny valin'ny Savile sy ny fomba fanao 'zero tolerance' ataon'ny polisy sy ny sampam-pitsarana. Io fiakarana goavana io dia mitovy ihany koa amin'ny fahatongavan'ny fidirana amin'ny aterineto. Afa-po ve ny fahafahana miditra amin'ny sary vetaveta amin'ny aterineto?
Ny lalàna momba ny fanitsakitsahana ny fanaovana firaisana ara-nofo ao Angletera sy Pays de Galles ary ao Scotland dia mieritreritra tanora iray "zaza", ary mila fiarovana, mandra-pahatongan'ny taonan'ny 18 taona.
Na izany aza, ny taona nanaovana firaisana ara-nofo dia taona 16. Ankizy maro no tsy mahatsapa fa na dia mihoatra ny taona nanaovana firaisana ara-nofo aza izy ireo, dia tsy mahazo alàlana haka ny fitiavan-tena erotika ary handefa azy ireo mandra-pahatongan'ny 18 taona. Ny fametrahana sarin'ireo ankizy tsy misy fanekena dia tsy ara-dalàna. Ny ankizy eo ambany 13 dia tsy manana ny fahafahana ara-dalàna hanaiky ny endrika endrika firaisana ara-nofo.
Ny lalàna eto amin'ity sehatra ity dia natao hampiharina amin'ny lehilahy lehibe sy ny ampahany kely amin'ny vehivavy manana fahalianana amin'ny fikarakarana ny ankizy izay nokasain'izy ireo hanao firaisana ara-nofo na mikasa ny hampiditra ankizy amin'ny fivarotan-tena na pôrnôgrafia. The lalàna any Angletera sy Wales dia nilaza fa “Ny ankizy voarohirohy amin'ny fivarotan-tena dia iharan'ny herisetra voalohany indrindra ary ireo olona manararaotra azy ireo amin'ny fitrandrahana azy ireo dia mpanararaotra ankizy.”
Ankehitriny, ny fandikana hentitra momba ny 'ankizy' dia midika fa ny zatovo manadihady ny fahalianany amin'ny firaisana ara-nofo, miaraka amin'ny fanampian'ny teknolojia vaovao, dia mety hampangaina ho nanao firaisana ara-nofo mahatsiravina.
Mazava ho azy fa mitandrina tsara ny mpampanoa lalàna ny mijery ireo toe-javatra rehetra ireo ary manamarika tranga iray ho an'ny fanenjehana raha toa ka liana amin'ny tombontsoam-bahoaka izany.
Izy ireo dia hisaina ny anton-javatra toy ny fahasamihafana eo amin'ny antoko eo amin'ny antoko, ny fifandraisana eo amin'ny antoko eo amin'ny sehatry ny fifandraisana ara-pananahana, ara-batana, ara-pihetsehampo ary ny fanabeazana.
Tao amin'ny 2014 any Angletera, nisy mpianatra zazavao iray nodinihina taorian'ny nandefasana sary tsy misy dikany ho an'ny sipany. Nahazo fampitandremana izy tatỳ aoriana ary nandefa ilay sary tamin'ny namany rehefa avy nijanona izy roa vavy. Lalàna vaovao, Fihetseham-panararaotana sy lalàna mametaveta, mifampiraharaha amin'ny 'pôrnôgrafia valifaty' dia ny fandefasana sary mamoafady nefa tsy mahazo alalana. Jereo ny pejy misaraka amin'ny revenge porn eo amboniny.
Ny olana eto dia ny tsy fisiana na ny fanitsakitsahana ny fanekena. Ny fomba fandefasana 'zero tolerance' amin'ny hetsika toy izany dia toa noraisin'ny manampahefana sy ny polisy any UK.
Ity no torolàlana ankapobeny ho an'ny lalàna ary tsy misy toro-hevitra ara-dalàna.
Inona no atao hoe fanekena amin'ny lalàna? >>